Ejipta: fandripahana kristiana tao Naga Hammady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2010 9:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Italiano, عربي, বাংলা, Swahili, Português, bahasa Indonesia, Español, English
Zeinobia namoaka lahatsoratra momba ity fandripahana ity ao amin'ny bolongany nilaza hoe:
Bolongana hafa koa, Coptic File, no nanoratra momba ity toe-java-nitranga ity:
Ao amin'ny Misr Digital, no amoahan'i Wael Abbas lahatsarin'ny fitifirana tao Naga Hammady.
Nizara ny fihetseham-pony mitovitovy amin'izany ihany koa i Nawara. Hoy izy raha namaky ny fanambarana an-gazety navoakan'ny minisiteran'ny atitany izy:
Tsikerain'i Cat of the Desert ny fiaraha-monina sy ireo extremistes amin'ity toe-draharaha ity.
Nogafian'izy ireo ny fifaliana sy ny fankalazana krismasy, ary namono tamin'ny alalan'ny bala izy ireo. Ary dia mbola mihorakoraka momba ny martioran'ny inona ihany izy ireo, ary dia nantsoiny ho maritioran'ny hijab ihany iny vehivavy iny.
Avy eo dia nampiseho lahatsary ahitana an'i Abu Is-haq El Huwainy mampitandrina ny olona amin'ny kristiana sy ny fiokoana ataon'izy ireo hamelezna an'i Ejipta izy!
Etsy ankilan'izany koa ny mpamaham-bolongana Ejipsiana, Te3ma, dia mino fa misy hery vahiny ao ambadik'ity raharaha ity: